Azo alaina any China izao ny fakana magazay Apple. Avy amin'ny mac aho
Normal ho an'ny maro amintsika izany satria afaka manao izany isika manaova fividianana amin'ny fivarotana an-tserasera Apple ary mijanona amin'ny fivarotana Tamin'ny fotoana sy andro voatondro haka azy io amin'ny magazay ofisialy dia tonga tany Chine tamin'ny fomba ofisialy.
Ary any Chine mandraka ankehitriny dia afaka mividy amin'ny Internet ny mpampiasa fa ny Safidy fanaterana vokatra any an-trano. Ireo fandefasana ireo dia tsy nitovy arakaraka ny faritra onenan'ny mpampiasa ary ankehitriny izy ireo dia afaka misafidy ny fakana magazay ho fomba iray amin'ny fividianany.
Efa nisy ny fakana magazay tao Hong Kong sy Taiwan, ankoatry ny firenen-kafa mazava ho azy, fa tsy any Chine ka afaka miteny isika fa tonga any aminy indray ity serivisy ity. Ankehitriny dia azon'izy ireo atao ny manamarina ny fivarotana Apple sy ny fotoana manokana hakana ny vokariny ao amin'ny magazay ara-batana, amin'izany fomba hiantohany ny fandefasana.
Ankoatr'izay, zava-misy lehibe iray izay tsy maintsy raisina momba ity fomba vaovao eto amin'ny firenena ity ireo mpampiasa izay misafidy an'io fomba fandefasana io dia tsy afaka manampy fifandraisana hanangonana ny baikony mitovy amin'ny azontsika atao, izany hoe ny mpanjifa mihitsy no tsy maintsy mandeha maka ny filaharana miaraka amin'ilay famantarana mifandraika aminy hitondra izany aminy.
Easy Pickup dia serivisy fitsikerana izay safidin'ny mpampiasa Apple amin'ny fotoana maro. Ny fivarotana Apple any Shina dia misokatra hatrany amin'ny fameperana ara-pahasalamana sy fiarovana, ary ny fakana magazay dia hanampy amin'ny fitantanana ny isan'ny olona miditra amin'ny fivarotana ary mety hampihena ny fifandraisan'ny mpanjifa. Toy ny mahazatra, ny fandefasana dia ho haingana, maimaimpoana ary saika tsy hifandray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Azo atao any Chine izao ny fakana fivarotana Apple
Efa manana "karaoke" mampiroborobo ny vanim-potoana faharoa an'ny "Central Park"